'विरोध होइन अनुरोध, किताब पढ्न... :: अनुषा अधिकारी :: Setopati
अनुषा अधिकारी काठमाडाैं, फागुन ७
'सुसेल्दैमा सुन्दैन, ऊ ढुंगा हो, हतौडा बजाउनुपर्छ
शब्दको भाषा नबुझ्नेलाई, मुस्लो दन्काउनुपर्छ
यदि तिमी आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सक्दैनौ भने
यदि तिमी आफ्नो हकका लागि बोल्न सक्दैनौ भने,
म तिमीलाई केही भन्दिनँ,
तिमी तयारी सुरू गर
एकादेशको कथा पढ्न!'
बुधबार करिब पाँच बजेतिर माइतीघर मण्डलमा उभिएर विनोद देउवा आफूले लेखेको कविता पढ्दै थिए।
कविता पढिसकेर उनलाई सुनिरहेका विद्यार्थीको हुलले ताली पड्कायो। त्यही बेला विनोदले आफ्नो कविता लेखेको पाना आगो सल्काएर जलाए।
अर्की एक विद्यार्थीले पनि त्यसैगरी आफूले रचना गरेको कविता वाचन गरिन् र कविताको पाना उसैगरी जलाइन्।
ती पाना जलिरहँदा त्यहाँ उपस्थित सबै विद्यार्थी एउटै नारा लगाइरहेको थिए– 'किताब माथिको कर खारेज गर।'
पुस्तकमाथि बढेको कर विरूद्ध आवाज उठाउँदै विद्यार्थीहरू करिब एक महिनादेखि विभिन्न स्वरूपका प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
उनीहरूले यसअघि माइतीघर मण्डल, सिंहदरबार निषेधित क्षेत्र र त्रिचन्द्र कलेज गेटबाट प्रदर्शन र्‍याली निकालेका थिए। पछि सिंहदरबार गेटअगाडि शान्त बसेर किताब पढ्दै आन्दोलन गरे। त्यस क्रममा ९ जना विद्यार्थीलाई प्रहरीले जेल समेत लगेको थियो।
सरकारले अझै बेवास्ता गरेपछि विद्यार्थीहरूले त्रिचन्द्र कलेज,पाटन दरबार क्षेत्रमा हुँदै माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि शान्त रूपमा किताब पढ्दै प्रदर्शन गरे पनि बुधबार उनीहरू आक्रोशित देखिन्थे।
प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आफ्नो हक र अधिकारका लागि आवाज उठाएको विनोदले बताए। शान्त रूपमा अघि बढिरहँदा सरकारसम्म गुनासो नपुगेको हुनसक्ने भएकाले विद्यार्थीहरू आवाज उठाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
प्रदर्शनको सुरूमा विद्यार्थीहरू मुखमा कालो टेप टाँसेर र हातमा नारा लेखिएका कागज समातेर उभिरहेका थिए। कोही किताब पढिरहेका थिए। पछि भने उनीहरू कविता वाचन गरी पाना जलाउन थाले।
माइतीघर मण्डलमा साढे चार बजे सुरू भएको प्रदर्शन एक घन्टा चल्यो। यसलगत्तै विद्यार्थीहरू 'किताब माथिको कर खारेज गर', 'सरकार शिक्षित मान्छेसँग डराएको छ', 'प्रिय प्रधानमन्त्री, किताबमाथि कर किन?', 'विरोध होइन अनुरोध, किताब पढ्न किन अवरोध' लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर पाटन क्षेत्रतिर लम्किए।
गत सोमबारदेखि बेलुकाको पाँच बजेदेखि ६ बजेसम्म निरन्तर पाटनमा किताब पढेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनका लागि भनेर विद्यार्थी आफैंले पैसा उठाएर स्पिकर किनेका ल्याएका छन्। जसबाट हरेकले माइकमा आफूले पढेका किताबबाट थोरै पाठ सुनाउन पाउने यसै प्रदर्शनमा संलग्न अर्का विद्यार्थीले बताए।
प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै मंगलबार बेलुका लेखक कुमार नगरकोटी र रंगकर्मी घिमिरे युवराजले किताब पढेका थिए। साथै स्ट्यान्डअप कमेडियन आर्दश मिश्रले पनि आफ्ना भनाइ राखेका थिए।
बुधबारको प्रदर्शनमा भने लेखक युग पाठकले उपस्थिति जनाए। प्रदर्शनमा संलग्न विद्यार्थीकाअनुसार अब पाटनमा हुने हरेक प्रदर्शनमा लेखक तथा अन्य व्यक्तित्व पनि सँगै बसेर शान्त प्रदर्शन गर्नेछन्।
उनीहरूले प्रदर्शन क्रममा सस्तो मूल्यमा किताब बेच्न राखिने पनि बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ७, २०७६, १२:३४:००